ကြည့်ရှုသူတိုင်းရဲ့ နှလုံးသား ကို ဆွဲကိုင်လှုပ်နိုင် ခဲ့တဲ့ ကလေးငယ်လေး၏ မြန်မာ့ရိုးရာအက(ရုပ်/သံ) – Zartiman
ကြည့်ရှုသူတိုင်းရဲ့ နှလုံးသား ကို ဆွဲကိုင်လှုပ်နိုင် ခဲ့တဲ့ ကလေးငယ်လေး၏ မြန်မာ့ရိုးရာအက(ရုပ်/သံ)
အခုလို မြန်မာ့ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှုကို ချစ်မြတ်နိုးနေတာကို မြင်ရတော့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတွေ အတွက် အရမ်းကို ဂုဏ်ယူ မိတယ်…. က လေးတွေယခုလို မြန်မာ့ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှုတွေကို ချစ်မြတ်နိုးဖို့ ဆိုတာကလည်း မိဘ၊ဆရာသမားတွေနဲ့ အများကြီး သက်ဆိုင်ပါတယ်။
မြန်မာ့ရိုးရာအမွေအနှစ်တွေကို ပိုမို အဓွန့်ရှည်တည်တန့်ခိုင်မြဲပါစေ ဆုတောင်းရင်း စေတနာကောင်းဖြင့် တော်လိုက်တာ သမီးလေးရယ်…. မြန်မာ့ ရိုးရာ အမွေအနှစ်တွေ ထဲမှာ ဒီလိုကပြဖျော်ဖြေမှုတွေကလည်း တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်….။
ယခုခေတ်က အနောက်တိုင်း ယဉ်ကျေးမှုတွေကို အတုယူပြီး လူကြီး လူငယ် မရွေးမနောက်တိုင်း ယဉ်ကျေးမှုတွေကို ပိုမိုလက်ခံလာ ကြ တယ်…..။
အခုလို မွနျမာ့ရိုးရာ ယဉျကြေးမှုကို ခဈြမွတျနိုးနတောကို မွငျရတော့ ကြှနျတျောတို့ မွနျမာတှေ အတှကျ အရမျးကို ဂုဏျယူ မိတယျ…. က လေးတှယေခုလို မွနျမာ့ရိုးရာ ယဉျကြေးမှုတှကေို ခဈြမွတျနိုးဖို့ ဆိုတာကလညျး မိဘ၊ဆရာသမားတှနေဲ့ အမြားကွီး သကျဆိုငျပါတယျ။
မွနျမာ့ရိုးရာအမှအေနှဈတှကေို ပိုမို အဓှနျ့ရှညျတညျတနျ့ခိုငျမွဲပါစေ ဆုတောငျးရငျး စတေနာကောငျးဖွငျ့ တျောလိုကျတာ သမီးလေးရယျ…. မွနျမာ့ ရိုးရာ အမှအေနှဈတှေ ထဲမှာ ဒီလိုကပွဖြျောဖွမှေုတှကေလညျး တဈခုအပါအဝငျဖွဈပါတယျ….။
ယခုခတျေက အနောကျတိုငျး ယဉျကြေးမှုတှကေို အတုယူပွီး လူကွီး လူငယျ မရှေးမနောကျတိုငျး ယဉျကြေးမှုတှကေို ပိုမိုလကျခံလာ ကွ တယျ…..။
စွဲမက်စရာကောင်း တဲ့ အလှတရားတွေနဲ့ ပက်ထရစ်ရှာ ရဲ့ အမိုက်စားVIDEO
အသည်းယားစရာအမူအရာတွေနဲ့ အလန်းစားဆော့ကစားထားတဲ့ ခင်ဝင့်ဝါ